Ny torapasika tsara indrindra any Phuket (fizarana 1) ~ Journey-Assist - Ireo famoahana hevitra, sary, fijerena, hevitra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Torapasika Phuket (ampahany 1)
Topy maso ny tora-pasika tsara indrindra any Phuket (ampahany 1)
Ampahany amin'ny 1
Ampahany amin'ny 2
Renivohitra Nai Yang - Phuket
Renirano Nai Yang
Ity morona ity dia hita any atsimo amin'ny seranam-piara-manidina. Manana fotodrafitrasa tsy zarizary izy io. Ao amin'ny faritaniny dia misy ny trano fisotroana kafe, hotely, tranombarotra kely ary trano basy eo akaikiny. Ary koa, satria tokony ho eo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina, misy hotely misy manodidina akaiky amin'ny kitapo misy hafa.
Eto amoron-dranomasina amin'ny maraina dia afaka mividy trondro vaovao ianao.
Tsy dia malaza loatra ny tora-pasika noho izy any lavitra any amin'ny faritr'ireo mpizahatany indrindra any Phuket.
Malemy ny fotodrafitrasa any amoron-dranomasina. Tsy misy resaka resaka fandroana, ary mila tadiavina ny trano fidiovana. Fandriana masoandro sy elo. Ny vidin'ny hofany amin'ny 200 baht.
Tsy madio tanteraka ny tora-pasika. Ary amin'ity lafiny ity dia mitovy amin'ny morontsirak'i Patong izy, saingy tsy hadinony, satria kokoa noho ny malaza sy be olona ny olona tia ny fialantsasatra amoron-dranomasina tsy misy :).
Mba te-hitsidika izao tora-pasika izao ihany koa ny olona any an-toerana rehefa faran'ny herinandro.
Amin'ny vanim-potoana ambany, dia mampalahelo ny toe-javatra miaraka amin'ny fahadiovan'ny tora-pasika.
Tsara kokoa ny milomano any afovoan-tanàna miaraka amin'ny fidirana amin'ny haingam-pandeha sy sunbeds miaraka amin'ny elo.
Betsaka ny casuarins amin'ny morontsiraka, mamorona alokaloka.
Any atsimo sy avaratry Nai Yang, ny fidirana amoron-dranomasina dia lava loatra, tsy mitombina tanteraka raha mahatratra ny halalin'ny tony ambany. Any amin'ny tapany atsimo amoron-dranomasina, izay misy lavanila sy vato be dia be ny mpanangona eo an-toerana amin'ny alàlan'ny rano mihena.
Marihina koa fa amin'ny vanim-potoana ambany dia misy rivotra mahery, ary miaraka amin'izy ireo ny onjan-drano, noho izany amin'ny ankizy kely dia tsy toerana milamina indrindra izany.
Valiny ho an'ny Pantai Nai Yang (Hevitra momba ny Google)
Hevitra ho an'ny Pantai Nai Yang (Tripadvisor.com))
Farihy Nai Yang ao amin'ny sari-tany
Weather in Nai Yang Beach. Widget ifandraisana!
Nai Thon Beach - Phuket
Nai Thon na Knighton, dia farihy am-pahibemaso amin'ny habeny kely, izay eo akaikin'ny seranam-piaramanidina.
Araka ny fijerena dia iray amin'ireo torapasika tsara indrindra any Phuket! Fahatongavana ho tahaka an'i Sanuk sy Sabai eto an-tany :).
Fasika fangaro madio, rano madio turkia ary alokaloka voajanahary dia miandry ireo tia ny fialantsasatra amoron-dranomasina izay miala sasatra eto.
Ny fotodrafitrasa eny amoron-dranomasina dia tsotra nefa ampy. Ny fidiovana any amin'ny trano fisotroana manodidina azy dia maimaimpoana avokoa. Tsy dia fahita firy ny masoandro, fa misy alokaloka be dia be.
Misy koa ny hamonoka, eny fa na dia angady aza. Misy fantsom-baovao avy amin'ny rano manadio ny tongotrao aorian'ny ranomasina.
Mandehandeha lavitra any amin'ny kafe sy trano fisakafoanana tsara, fivarotan-tena, famaingoana bisikileta.
Miaraka amin'i Naithon, misy arabe miampatra eo akaikin'ny hotely. Ity tanàna ity dia somary haorina tsara. Ireo Casuarines dia mitombo eo anelanelan'ny arabe sy ny tora-pasika.
Amin'ny ankapobeny, tsara tarehy ny Pantai Naithon ary manana fomba fijery mahafinaritra sy mahafinaritra.
Ny ankabeazan'ny olona dia eo afovoany, ary raha mifindra amin'ny miankavanana na miankavia ianao, dia vitsy kokoa ny olona, ​​ary ny morona dia mbola mahafinaritra!
Momba ireo lesoka, dia satria tsy voahaja tsara io, ary matetika eo amoron-dranomasina no ahitanao ireo rantsan-tanana sy cones ary zavatra hafa nateraky ny onja.
Ary ny minus-ny koa dia ny toerany. Ny maha-akaiky ny seranam-piaramanidina dia iray fanampiny, saingy minus, izany dia elanelan'ny halehiben'ny hetsik'i Phuket. Eny, ny vidiny ao amin'ny trano fisotroana sy ny fivarotana any an-toerana dia somary avo kely kokoa noho ny ankamaroan'ny tora-pasika any Phuket.
Ny alina dia tsy eto koa.
Valiny ho an'ny Nai Thon Beach (Hevitra momba ny Google)
Nana Thon Beach Reviews (Tripadvisor.com))
Nai Thon Beach amin'ny sari-tany
Weather on the beach Nai Thon Beach. Widget ifandraisana!
Hotely manodidina ny Nai Thon Beach
Ranomasina bay (Renirano Bang Tao)
Tena lava ity tora-pasika ity - sahabo ho 5 km. Ny faritra atsimon'i Bang Tao dia mendrika hivelomana, satria any avaratra dia vitsy ny trano hofainina, ary koa trano fivarotana sy trano fikarakarana sakafo. Manjaka eto ny mandoza, ary misy kafe maromaro any amoron-tsiraka. Milamina io amoron-dranomasina io amin'ny ankapobeny. Koa satria lehibe i Bang Tao, samy manana ny toetrany ireo faritra samihafa:
Weather on Bang Tao Beach. Widget ifandraisana!
Tena be sy be ary be tora-pasika be. Farafaharatsiny mandritra ny vanim-potoana, azo antoka.
Amin'ny vanim-potoana ambany, ity morontsiraka ity dia misy fitarainana maro momba ny fako amin'ny fasika sy amin'ny rano. Amin'ny fihenan-drivotra, izany rehetra izany dia mankany amin'ny ranomasina, ary ny tora-pasika dia mamela fahatsapana mahafinaritra. Fa amin'ny vanim-potoana ambany dia vitsy ny olona. Amin'izao vanim-potoana izao, ary ny onja matetika matetika mahery kokoa noho ny vanim-potoana, ireo izay manana zaza kely dia tokony handray an-tànana izany. Saingy amin'ny vanim-potoana iray toy izao dia malaza amin'ny mpitia ity torapasika ity hilalao onja!
Kely ny fasika ary, araka ny filazan'ny mpanoratra, mahafinaritra ny fikitika).
Ny fidirana amin'ny ranomasina dia malemy fanahy, i.e. ny tora-pasika dia mahazo aina tsara amin'ny lomano. Tsy ampy ny alokaloka eto fa arakaraka ny habetsaky ny masoandro sy ny elo (raha mandoa vola izany, mazava ho azy). Ny vidin'ny hofan'ny trano fandraisam-bahiny dia eo anelanelan'ny 200 sy 300 baht.
Ity tora-pasika ity dia manolotra fomba fijery mahafinaritra amin'ny hazavan'ny masoandro.
Eto ianao dia maheno resaka matetika Rosiana. Eo amin'ny faritanin'i Surin koa misy soratra maro amin'ny teny Rosiana (famantarana, dokambarotra, lisitry ny vidiny). Nandritra ny taona vitsivitsy farany, ny Rosiana dia nanjaka teo amin'ity tora-pasika ity, ary ny fisian'ny takelaka sy ny fiteny rosianina eto dia tsy toy izany mihitsy.
Manakaiky ny tora-pasika betsaka Trano fandraisam-bahiny kintana 4-5.
Ao koa ny fivarotana fitaterana Famili Mart sy Sevan Ilaven (7-11).
Ho an'ny fiara fitaterana fiara dia saha tsara ny kianja filalaovana baolina kitra, izay hita kely eo amin'ny sisin'ny vavahady lehibe, akaikin'ny tempoly.
Avy amin'ny lafiny morontsiraka dia afatotra vato izay akaikinao posnorklit.
Ho an'ireo tia fandriampahalemana sy milamina dia manoro hevitra isika hitsidika ity tora-pasika ity amin'ny maraina, satria feno olona ny mitataovovonana. indrindra amin'ny vanim-potoana ambony.
Valiny ho an'ny Surin Beach (Hevitra momba ny Google)
Surin Beach Review (Tripadvisor.com))
Morontsiraka Surin amin'ny sari-tany
Weather on Surin beach. Widget ifandraisana
Trano fandraisam-bahiny Surin
Eto dia manjaka ny fahanginana sy ny fandriam-pahalemana. Vitsy dia vitsy
Ny fasika dia somary misy akorandriaka. Madio ny rano, na dia misy fitarainana matetika eo amin'ny olona fa ny renirano manondraka ary tsy misy olona manidina eo akaikin'ny ranomasina, ary izany dia hita taratra amin'ny rano madio eo amoron-dranomasina.
Diovina tsy tapaka ny morontsiraka.
Lehibe ity morona ity. Ny fotodrafitrasa dia miovaova amin'ny faritra samihafa. Fa amin'ny ankapobeny, dia tena tony dia tsy misy ny mosary.
North. Avy eny amoron-dranomasina Surin ny fidirana amin'ny alàlan'ny pass dia azo atao. Mihazakazaka manaraka ny morontsiraka ny lalana. Misy trano kely hofofana, ary be dia be ny fakana trano. Ny tora-pasika dia tafasaraka amin'ny lalana amin'ny alàlan'ny faritra voaroy miaraka amin'ny hazo marobe ary maro an'isa. Ny trano fandraisam-bahiny tsirairay ao an-toerana dia hita eo ampitan'ny arabe avy amin'ny ranomasina. Ny fibodoana olona ao amin'ity faritra Kamala ity dia azo raisina ho salanisa.
Ny tapany. Avy amin'ny morontsiraka mankany amin'ny tany ny lalana eto. Betsaka ny olona betsaka noho ny any avaratra. Somary marefo ilay trano. Misy toeram-pivarotana.
Atsimo. Mijanona eo amoron-dranomasina eto io lalana io, toy ny any avaratra, nefa tsy ity lalana ity intsony no lalana (satria nivadika sy nankeo amoron-dranomasina ny lalana Patong), ary faharoa. Any amin'ny faritra atsimon'ny Kamala, dia tena be mponina, ary misy fako voajanahary mipetraka eo amoron-dranomasina. Misy vavahady somary lava ihany koa mankany amin'ny ranomasina, mila mandroso amin'ny rano sahabo ho 50 m ianao.
Mandritra ny halavan'ny moron-dranomasina, mandritra ny halavan'ny torapasika, dia mihena ny rano, ka lasa sarotra kokoa aza ny milomano.
Amporisihina ho an'ireo izay te hanambatra fetin'ny sivilizasiona ary hankafizany ilay toerana mahafinaritra. Ho an'ny fitsidihany tsy tapaka dia tsara kokoa ny mipetraka eto amin'ny andrefan'ny Phuket. Soa ihany fa misy trano fandraisam-bahiny 3 sy 4 amin'ny vidiny mirary. Izy ireo dia manome ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina - elo, seza famafazana, kasety.
Fotodrafitrasa tsara amoron-dranomasina io. Misy mandro be, trano fidiovana. Afaka mahazo fisakafoanana chaise misy am-borona ianao amin'ny 200 baht. Amin'ny dia an-tongotra lavitra be dia be ny kafe izay mifantoka amin'ny tetibola hafa tsy mitovy. Misy fiara mijanona amin'ny bisikileta sy fiara. Misy tombony voajanahary foana amin'ny hazo.
Raha reraka ianao Patong avy amin'ny fiakaran'ny tanàna, ny morontsiraka milamina "ambanivohitra" any Kamala dia ho fifaliana ho anao 🙂.
Io morontsiraka io dia tsy mahita masoandro milentika!
Reviews for Kamala Beach (Hevitra momba ny Google)
Reviews for Kamala Beach (Tripadvisor.ru)
Kamala Beach amin'ny sari-tany
Weather in Kamala Beach. Widget ifandraisana
Hotely manodidina ny Kamala Beach
I Patong dia azo heverina ho afovoan'i Phuket.
Any amin'ny faritry Beach Beach no misy an'io. Ny tena tombony amin'ity tora-pasika ity dia ny fotodrafitrasiny mahasoa, misy ny fivarotana maro, trano fisakafoanana ary trano fisakafoanana maro. Inona no dikan'ilay Lalotra Bangla malaza eran-tany? Ny fiainana mavitrika indrindra eto dia manomboka aorian'ny filentehan'ny masoandro. Eny, amin'ny ankapobeny, ity tora-pasika ity, sy ny faritra misy ny anarana mitovy, izay misy azy, dia mifantoka kokoa amin'ny "pesta any andaniny." Ary raha liana amin'ny natiora sy miala voly ianao dia mila torapasika hafa 🙂.
Ny tora-pasika mihitsy, tsy madio noho ny haben'ny turista. Miasa ny serivisy fanadiovana, saingy mazava ho azy tsy mitandrina. Mijanona ny fako rehefa avy mpizahatany ary ny ranomasina koa mianaka. Noho izany dia tsy tokony miankina amin'ny torapasika madio sy rano madio ianao.
Ny morontsiraka dia manana halavola be sy morontsiraka midadasika.
Tsara homarihina fa renirano misy lakia milentika mankeny amin’ny ranomasina miankavia, ka tsara kokoa ny mitoetra eo amin’ny ankavanana.
Fotodrafitrasa ao Patong Beach
Ny fotodrafitrasa any amoron-dranomasina no tsara. Manana ny zavatra ilainao rehetra izany.
Mpiandry vola (2019 - 200 baht ho an'ny elo marika + mirehitra), kafe, bara, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, mpamonjy aina ... eto daholo izany rehetra izany.
Ny entana eo an-toerana no amidy rehetra, manomboka amin'ny sakafo tsotra hatramin'ny firavaka.
Betsaka ny fotoana mety amin'ny fanatanjahantena rano sy ny hetsika an-dranomasina. Jet skis, parachutes, kayaks sy ny maro hafa. Ho an'ny vidiny, tsy lafo ny zava-drehetra eto, fa raha tonga ny maraina ianao, dia hiezaka ny hahagaga anao ny fihenam-bidy lehibe.
Omena isaky ny dingana ny tolotra Thai.
Ny tsy hita eto dia trano fisoloana miovaova, toy ny ao amin'ny torapasika rehetra any Thailandy. Raha, efitra fidiovana sns ... fa ilay vola kosa.
Làlavitra lava mankany amin'ny morontsiraka avy any Kamala anefa, mbola lavitra be avy eo izao. Misy lalana iray tokana manaraka an'i Patong. Eo anelanelan'izany sy ny morontsiraka, mitombo ny hazo ary misy ny varotra ivarotana izay mivarotra entana isan-karazany. Afaka miditra ao Patong ianao na aiza na aiza. Saingy, any atsimo indrindra, dia saika tsy feno ny piera, tsy misy ny olona sy ny masoandro. Ao ny rano no madio kokoa.
Patong dia be mpitia eo amin'ireo mpizahatany miteny rosianina. Ary eny amoron-dranomasina sy manodidina azy, ny manodidina anao dia afaka mandre resaka miteny Rosiana ary mahita takelaka amin'ny teny Rosiana, famantarana, marika vidiny ary maro hafa. Ary saika ny Thailandey rehetra izay miasa amin'ny sehatry ny serivisy eo amoron-dranomasina no mahalala ny teny lehibe any Rosiana.
Reviews any Patong Beach (Hevitra momba ny Google)
Patong Beach Reviews (Tripadvisor.com))
Tany amoron-dranomasina Patong
Trano fandraisam-bahiny any Patong beach
Karon dia iray amin'ny torapasika lehibe sy mahasalama indrindra any Phuket. Mampalahelo fa tsy mahatanty fanadiovana azy tsara izy ireo (na dia manandrana) aza izy ireo, ary manomboka eo dia afaka mahita fako natondraky ny rano eny amin'ny morontsiraka ianao. Fa ny tena tsara dia madio.
Manaraka azy io dia misy kafe sy trano fisakafoanana be dia be, tsy olana foana ny fitadiavana taxi.
Any amin'ny tora-pasika io, somary tsara ny fotodrafitrasa, misy koa hetsika isan-karazany amoron-dranomasina. Betsaka ny tara-masoandro amin'ny vola samy hafa. Matetika ny olona any an-toerana dia mitondra sakafo tsotra eny amoron-dranomasina.
Afaka mandeha amin'ny tora-pasika ianao amin'ny alàlan'ny pas kely kely hitarika Patong. Avy any atsimo dia afaka tonga any Karon avy amin'ny tora-pasika ianao Katamandeha tsara ao Karon.
Saika na aiza na aiza dia miampita ny morontsiraka ny lalana. Eo anelanelan'io lalana io sy ny morontsiraka no misy ireo hazo sy fasika manokana. Noho izany, ny fidirana amin'ny tora-pasika dia azo atao amin'ny lafiny rehetra. Karon dia torapasika malaza, na izany aza dia tsy dia be atao raha ampitahaina Patong.
Akaiky eo akaikin'i Karon Park, izay ahitanao ny dobo sy ny tany foana.
Ny hotely manodidina dia dimy kintana.
Ny rano eto na madio na tsy be (miankina amin'ny toetrandro sy vanim-potoana). Kely ny fasika quartz eto ary manana ny ilany ao ambanin'ny tongony fotsiny.
Amin'ny rano kely, tsy mamela be ny rano, fa ny fidirana amoron-dranomasina dia lava foana.
Io torapasika io dia tena nalaza eo amin'ireo mpizahatany Rosiana.
Reviews for Pantai Ankapobeny (Hevitra momba ny Google)
Hevitra momba Karon (Tripadvisor.ru)
Karon Beach amin'ny sari-tany
Weather in Karon Beach. Widget ifandraisana
Hotely akaikin'ny Karon Beach
Weather in Teny Beach. Widget ifandraisana.
Teny Noi Beach - Phuket
Teny Noi Beach
Afaka tonga eto amin'ny tora-pasika ianao Katamiampita ny havoana. Na dia tsy avo dia avo aza ity havoana ity, somary marefo ilay izy, ka mandreraka ny diabe. Misy hotely marobe eo anelanelan'ny ranomasina sy ny lalana. Ny fidirana amoron-dranomasina dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny toerana roa: amin'ny fiandohan'ny tora-pasika mamaky ny havoana ary any amin'ny faran'ny tora-pasika.
Tsy mora ny mametraka fiara eto: tsy misy ny toerana fiantsonan'ny fiara (fa ho an'ny bisikileta), tsy ampy amin'ny fiara ny sakany. Kely ny haben'ny tora-pasika. Tsy be mitazona izany, fa ampy ny fipetrahana masoandro.
Fasika amin'ny habe antonony ary misy ny akorandriaka. Ny rano dia madio indrindra. Mihetsika ny onja.
Ny fidirana dia malemy fanahy ary mila mandeha 50 metatra mankany amin'ny halaliny ianao, noho izany dia ho fialantsasatra amoron-dranomasina azo antoka amin'ny ankizy kely. indrindra satria tsy misy jellyfish eto.
Ny fotodrafitrasa dia misy, fa natao indrindra ho an'ireo vahiny amin'ny hotely misy eo an-toerana, ka mety hisy ny olana amin'ny fandroana aorian'ny fandroana.
Fa amin'ny ankapobeny, tena misy ny zava-drehetra. Fandriana masoandro ho an'ny hofan-trano, trano fidiovana, fandroana eto. Satria misy kafe misy vidiny mirary.
Misy ny hetsika amoron-dranomasina. Scooter rano, fanofa kayak, parasailing.
Ny tora-pasika io dia eo amoron-drano iray voahodidin'ny vato, ary amin'ireto vato ireto ny rano dia mazava indrindra ary afaka mahita trondro kely ao anatiny ianao, ary misy foza mivezivezy momba ireo vato ireo, izay mahaliana indrindra ho an'ny ankizy.
Amin'ireo minuses - ny aloky ny voajanahary eo amoron-dranomasina dia mazava fa tsy ampy, ary eo amoron-dranomasina dia misy rano lava amin'ny alàka.
Hevitra momba Kata noi (Hevitra momba ny Google)
Hevitra momba Kata noi (Tripadvisor.ru)
Tetezana teny Noi eo amin'ny sari-tany
Weather on Teny Noi beach. Widget ifandraisana
Hotely akaikin'ny Beach Kata Noi
Topy maso ny torapasik'i Phuket (ampahany 2).